Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo Baarlamaanka ka codsaday meel marinta wasiirrada | Baydhabo Online
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo Baarlamaanka ka codsaday meel marinta wasiirrada
Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale oo maanta ka qeyb gelayay banaanbax lagu taageerayay golaha wasiirrada cusub ee Soomaaliya ayaa sheegay in Baarlamaanka Golaha shacbka looga fadhiyo meel marinta xukuumadda cusub.
Yuusuf,waxaa uu sheegay in ay dhamaatay waqtigii is qab qabsiga,waxaana uu Xildhibaannada u soo jeediyay in ay ansixiyaan Golaha wasiirrada cusub ee uu Magacaabay ra’isalwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali kheyre.
Waxaa uu Guddoomiye Jimcaale ku dooday in Madxawyenaha uu ku yimid rabitaan shacab,Ra’isalwasaarahana uu ku yimid Mdaxaweynaha ay shacabka rabaan doonistiisa,Golaha wasiirradana ku yimaadeen doonista Ra’islawasaraah Soomaaliya.
Yuusuf Xuseen Jimcaale;ayaa waxaa uu Beelaha qaar u soo jeediyay in aysan wanaagsaneyn in gole wasiirro oo la magacaabay laga daba qeyliyo,waxaana uu ugu kula taliyay in xilku meerto yahay sidaas darteedna ay sugaan marar kale.
Shacabka isugu soo baxay fagaaraha daljirka daahsoon ayaa waxaa uu sheegay in ay taageersanyihiin Golaha wasiirrada cusub sidaas darteedna loo baahan yahay in Xildhibaannada ay ansixiyaan Golaha wasiirrada cusub.